वर्षौंपछि करिश्मा र राजेश एकैसाथमा, राजेश हमालले करिश्मालाई यस्तो भने… (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारवर्षौंपछि करिश्मा र राजेश एकैसाथमा, राजेश हमालले करिश्मालाई यस्तो भने… (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 5, 2021 admin समाचार 5967
नेपाली सिने जग’तका महानायक राजेश हमाल र सदा’बहार नायिका करिश्मा मानन्धरलाई फेरी एक पटक एकै साथ रमा’ईलो गर्दै गरेको अव’स्था देखिएको छ । यो देखेर सबै नेपाली दर्शकहरु निकै नै खुशी भएका छन् । दर्शकहरुले राजेश र करिश्माको जोडीलाई आ’जबाट मात्रै नभई यो जोडी पर्दामा देखिएसंगै मन प’राउन थालेका हुन् ।
यो जोडी नेपाली सिने जगतमा स’दाबहार जाडीको रुपमा सबै दर्शकको मन मन्दिरमा बस्न स’फल भएको जोडी हो । यसपटक वर्षौंपछि राजेश हमाल र करिश्मालाई एकै साथ रमा’ईलो गर्दै ठट्यौली पारामा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । मुन्द्रेको कमेडी क्ल’बमा दिपा श्री निकालिएपछि नायिका करिश्मा मानन्धर अध्यक्षको कुर्सि’मा बस्दै आएकी छिन् ।
सोही कार्यक्रममा अथि’तिको रुपमा महानायक राजेश हमाल पुगेका थिए । उनले कार्यक्रमको शो’भा नै बढाएका थिए । सोही कार्यक्रममा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरले काजी र बसन्तीको भूमि’कामा ठट्यौली पारामा रमाईलो गर्दै अभि’नय गरेका थिए । – इताजा खबरबाट
प्रचण्डकी नातिनीको गीतमा प्रियंका कार्कीको मोडलिङ (भिडियो हेर्नुहोस्)
सक्किगोनीमा मुन्नीसँग विबाह गर्न लाग्दा समातिएका विदेशी, काले दाइको पहिलो अन्तरबार्ता(भिडियो हेर्नुहोस्)
गणेश जस्ले आफ्नी श्रीमतीलाई पढाउन घर धाने, प्लस टू देखि ब्याचलर सम्म पढाए र माथिल्लो स्तरमा पुगेपछि अहिले श्रीमतीले छोडेपछि धरधरी रुँदै ( भिडियो हेर्नुहोस्)
December 30, 2020 admin समाचार 6009
छोरी चेली पढाउ, बुहा’री पढाउ, श्रीमती पढाउ । तर पढाउ किनभने पढेलेखेको म’हिला भएको घर कहिल्यै पनि अ’ध्याँरो हुँदैन भन्ने भनाई छ । त्यही भनाईलाई आ’त्मसाथ गर्दै गणेशले पनि आफ्नी श्रीमतीलाई दिलोज्यानले पढाए । आफुले
प्रधानमन्त्री ओलीका कारण ‘कपिल शर्मा शो’ फ्ल’प !
January 5, 2021 admin समाचार 7324
नेपाल क’म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारीक रुपमा वि’भाजन भएपछि अहिले दुई पक्षका नेता एक अर्का विरुद्ध आ’रोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक समु’ह छ भने पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको
‘भोलि यो संसार छाडेर जान सक्छु’ मलाई माफ गरिदेउ है आमा, भन्दै सं’क्रमित शिक्षिकाले बनाएको अ’न्तिम टिकटक भिडियो
May 29, 2021 admin समाचार 3688
मानिसको आयू कति छ भनेर कसैले अनुमा’न गर्न सक्दैन तर जीवनमा अनुमान गरेका केही कुरा आक’स्मिक रुपमा या भवितब्य भएर हो पूरा हुने गर्छन् । यस्तै एक घ’टना धनगढीमा भएको छ । एक शिक्षिकाले टि’कटकमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223050)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215068)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214743)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213034)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211917)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210858)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209465)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209365)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195045)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (178024)